Famoahana boky :: Namoronan’i Verenako Myriam Blériot angano ny « Barea » • AoRaha
Famoahana boky Namoronan’i Verenako Myriam Blériot angano ny « Barea »
Fitaovana hitaizana sy hanabeazana ny angano. Vitsy anefa ireo mahalala sy afaka nankafy azy ankehitriny. Hamerenana indray an’io kolontsaina io no nanainga an’i Verenako Myriam Blériot handrakitra anaty boky ny angano « Barea » izay noforoniny. Navoaka tamin’ ny fomba ofisialy, omaly, teny amin’ny tranombokim-pirenena Anosy, efitrano Gisèle Rabesahala ity rakitra an-tsoratra vaovao ity.
Nisy ny fikarohana manokana nahafahana namolavolana ny angano Barea. Nomarihina nandritra ny famoahana ny boky kosa fa nosoratana nandritra ny amboaran’i Afrika (CAN) nan-draisan’ny ekipam-pirenena malagasy anjara tany Egypta izy io. Efa re
tamin’ny Radiom-pirenena Malagasy (Rnm) izy talohan’ny nanontana azy an-taratasy. Roapolo pejy ny boky ary sandaina ho dimy arivo ariary. Nahazo izany maimaimpoana ireo Epp avy eny Andrefan’Ambohijanahary, Ivandry, Ambatolampy Tsimahafotsy ary Avaradoha.
Nanampy tosika tamin’ny fanontana an’ity angano Barea ity ny vondrona Filatex, ho an’ny famokarana boky miisa dimanjato. Santatra ihany izany raha ny fanambaràn’i Tanteraka Andrianiaina Rakotoarisoa, tompon’andraikitry ny asa sosialy eo anivon’ny Filatex fa mbola hisy ny fanontana manaraka.
« Mbola maro ny dingana hatrehan’ny ekipam-pirentsika ka tsara raha ampahafantarina ny rehetra amin’ny alalan’ny angano, ahitana taratra ny zavamisy ankehitriny ny mombamomba io biby io», hoy indray i Verenako Myriam Blériot manazava. Nanamafy izy fa tsy misy ny vanim-potoana manokana hamoronana angano. Samy manolotra ny aingam-panahiny hamehy ny
toe-piainana eo amin’ny tontolo misy azy ny tsirairay.
Nolazain’ ny filohan’ny Havatsa Upem, Andrianasolo Hajaina, kosa fa « Fahaterahana arahim-pifaliana izao. Ny teny mandalo fa ny soratra mitoetra. Nandrakitra tantara nanamarika ny firenena izy. Enga anie hisy ny tohiny ary hisy angano ho teraka foana ».
Fianjerana nitera-doza Vehivavy lehibe maty voahosin’ny kamiao
Voina tany Pangalana Zandary natsingevan’ny rano nandritra ny telo andro
« Festival Sar’nao» :: Hisantatra ny fampirantiana etsy Andavamamba i Serge Rakoto
Adin-kiragasy :: Nafana ny fihaonan-dRainitelo sy Rapaolison